Phyo Phyo Aung @ Hnin Pwint Wai - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
Phyo Phyo Aung @ Hnin Pwint Wai,aleader of the All Burma Federation of Students Union (ABFSU), is servinga4 years sentence in Moulmein prison.
She was arrested on 14th June 2008 and charged under Sections 6, 143, 145, 505/b.After Cyclone Nargis struck Burma on3May 2008, Phyo Phyo Aung knew that she couldn’t sit by and do nothing while people suffered.
She left with her father and other friends to head to the Irrawaddy Delta region to help. In the Delta they worked to deliver aid and bury dead bodies. Even though it had been overamonth since the cyclone struck, there were still bodies scattered. On the way back their car was stopped and all were arrested. She had been in hiding before then, because of her participation in the Saffron Revolution in September 2007. Her trip to the Delta was her first time leaving hiding since then. At the very beginning of the Saffron Revolution she helped re-establish the All Burma Federation of Students Unions, which had been crucial in the uprising in 1988.
When she was only one year old, her father Dr Nay Win was arrested and kept in prison for 15 years. For most of her life her mother alone raised her. Her mother didn’t want her to participate in politics, but Phyoe Phyoe Aung hasastrong desire to work for people. She is hard-working and passionate about education. Even though her family did not have the money, she sought every opportunity to learn. She really wanted to study English and learn computer skills and worked hard to learn. Before she was arrested she was attending the Government Technical College in Rangoon studying Civil Engineering.
တောင်ကိုရီးယားကျောင်းသားတွေ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေး
မကြာသေးမီက ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးယား ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ခရီး အတွေ့အကြုံတွေကို ဒီနေ့ ညနေပိုင်းက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့မှာ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဆိုးလ်မြို့ Haja Production School ကျောင်းခန်းမမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အတွေ့အကြုံ ရှင်းလင်းပွဲနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို တပြိုင်တည်း ကျင်းပတာပါ။အခမ်းအနားကို တောင်ကိုရီးယား လူငယ် ငါးရာနီးပါး တက်ရောက်တယ်လို့ ဆိုးလ်မြို့အခြေစိုက် မြန်မာကလေးများပညာရေး ထောက်ပံ့ကူညီရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ မောင်ဇော်က ပြောပြပါတယ်။
“အခမ်းအနားကို ရှစ်လေးလုံး ကျောင်းသားတွေ ရေးစပ်တဲ့ ကမ္ဘာမကြေဘူး သီချင်းကို ကိုရီးယား ကလေးတွေက ဆိုပြီး ဖွင့်လှစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ ခံစားချက်တွေကို ကာတွန်းတွေနဲ့ သရုပ်ဖော် ရေးဆွဲထားတာတွေ ရှိတယ်။ နောက် သူတို့ရိုက်လာတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ပြတယ်”
Haja Production School ကျောင်းက တောင်ကိုရီးယား ကျောင်းသား ၁၃ ဦး၊ အမေရိကန် ကျောင်းသားတဦးနဲ့ ထိုင်ဝမ် ကျောင်းသားတဦးတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိချိန်မှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးခန်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ မနက်က တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီ လူငယ်တွေဟာ လူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတဲ့ လူငယ်ကွန်ယက်ကို အထူး စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ထပ်မံ သွားရောက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပြီး တကယ်လို့ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ မရရှိရင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ကနေ လူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးအတွက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီ ကိုရီးယားကျောင်းသားတွေဟာ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဇွန်လကတည်းက အဖမ်းဆီးခံရပြီး မော်လမြိုင်အကျဉ်းထောင်မှာ ချုပ်နှောင်ခံနေရတဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်က မဖြိုးဖြိုးအောင် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လှုပ်ရှားကြမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုအကြောင်း ဒေါ်စမ်းစမ်းတင်က တင်ပြထားပါတယ်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းမှာ သေသူများကို သင်္ဂြိုလ်ပေး၍ ထောင်ကျခဲ့သူ ၂ ဦးကို ဂုဏ်ပြု
မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကို အထူးတရားရုံးက စီရင်ချက်ချ
နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးသူတွေရဲ့ အလောင်းတွေကို မီးသင်္ဂြိဟ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့သူ ဒေါက်တာနေဝင်းပါ ခြောက်ဦးကို ဒီကနေ့ အင်းစိန်ထောင် အထူးတရားရုံးက ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ကနေ လေးနှစ်အထိ အသီးသီး ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ကို အသင်းအဖွဲ့ပုဒ်မအပြင် ၈၈ ကျောင်းသားတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အကူအညီပေးတဲ့အမှုတွေနဲ့ အပြစ်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်မြင့်က အခုလို ပြောပါတယ်။
ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်မြင့်။ ။“နာဂစ်လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ကြွင်းကျန်တဲ့ အလောင်းတွေ သင်္ဂြိဟ်ရေးကိစ္စလုပ်တာကို စွဲဆိုတဲ့ပုဒ်မကတော့ ဒါတွေဟာ ဗကသ ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်၊ ဒီအပေါ်မှာ ကိုနေဝင်း၊ ကိုအောင်ကျော်ဆန်းနဲ့ ကိုဖုန်းပြည့်ကြွယ်တို့က အားပေးတယ်ဆိုပြီး ပုဒ်မ (၇) အရ စွဲထားတာ”
ဒေါက်တာနေဝင်း၊ ကိုဖုန်းပြည့်ကြွယ်၊ ကိုအောင်ကျော်ဆန်းတို့ကို ပုဒ်မ (၇) အရ ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်စီ အပြစ်ပေး လိုက်ပြီး ဒေါက်တာနေဝင်းရဲ့ သမီးဖြစ်သူ မဖြိုးဖြိုးအောင် အပါအဝင် ကိုအောင်သန့်ဇင်ဦးနဲ့ ရှိန်းရာဇာထွန်း တို့ကိုတော့ အသင်းအဖွဲ့ပုဒ်မ (၆) အရ ထောင်ဒဏ်လေးနှစ်၊ ပုဒ်မ (၇) အရ နှစ်နှစ်၊ ပြစ်မှု နှစ်ရပ်တပေါင်းတည်း အပြစ်ဒဏ် လေးနှစ်စီ အသီးသီး အပြစ်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပထမပိုင်းက အင်းစိန်ထောင် အထူးတရားရုံးအတွင်းကို ရှေ့နေ ဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ သိရ ပါတယ်။ အလားတူ နာဂစ်မုန်တိုင်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ လေးဦးဖြစ်တဲ့ မတင်တင်ချို၊ မယဉ်ယဉ်ဝိုင်း၊ မနီမိုလှိုင်နဲ့ ကိုမြတ်သူတို့ကိုလည်း အလားတူ အသင်းအဖွဲ့ပုဒ်မများနဲ့ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်စီ အသီးသီး အပြစ်ပေးခဲ့ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်သူ ကိုမင်းသိန်းထွန်း ကိုတော့ တရားမဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုနဲ့ မတ်လအတွင်းက ထောင်ဒဏ် ၁၇ နှစ် ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာနေဝင်းတို့ရဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသူ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်မြင့်ကို ဦးတင်အောင်ခိုင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း စေတနာဝန်ထမ်းများ နိုင်ငံရေးအမှုဖြင့် တရားစွဲခံရ
နာဂစ်မုန်တိုင်းမှာ သေဆုံးသွားသူတွေကို ရန်ကုန်ကနေ သွားပြီးသင်္ဂြိဟ်လို့ အဖမ်းခံရတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ဒေါက်တာ နေဝင်းနဲ့ သမီးဖြစ်တဲ့ B-TEC မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ပထမနှစ် ကျောင်းသူ မဖြိုးဖြိုးအောင်တို့ကို စစ်အစိုးရက မနှစ်က ဖမ်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က စတင် ရုံးထုတ်နေရာမှာ မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ရက် အင်္ဂါနေ့ထိ ၃ ကြိမ်မြောက် ရှိနေပြီး၊ ရှေ့နေလုံးဝ ဝင်ခွင့်မရဘူးလို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီအပြင် ရုံးထုတ်တဲ့နေ့က ဒေါက်တာ နေဝင်းရဲ့ဇနီး အင်းစိန်ထောင် တရားရုံးရှေ့ သွားရာမှာ တာဝန်ရှိသူတဦး ဟန်ဆောင်ပြီး လာရောက် စုံစမ်းမေးမြန်းသူကနေတဆင့် အစားအသောက် ပေးလိုက်ရာမှာလည်း ဒေါက်တာ နေဝင်းတို့သားအဖက အဲဒီ အစားအစာတွေ မရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အခု ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဒေါက်တာနေဝင်းဟာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်က ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ မြေအောက် လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စစ်အစိုးရက စွပ်စွဲပြီး ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ချမှတ်တာ ခံခဲ့ရသူပါ။ သူ့သမီး မဖြိုးဖြိုးအောင်က ဒေါက်တာ နေဝင်း အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ၁၉၈၉မှာ လူမမယ်အရွယ် ဖြစ်ပါတယ်။
အခု သူတို့ သားအဖအကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဖြိုးဖြိုးအောင်ရဲ့ မိခင်၊ ဒေါက်တာ နေဝင်းရဲ့ ဇနီး မသန္တာကို RFA မှ ကိုနေရိန်ကျော်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
Canadian city honours Aung San Suu Kyi